နာမည်ကြီး Website များဖြစ်သော Google, Yahoo! Bing စသည့် Search Engine များမှတစ်ဆင့် Yellow Pages, Directory စသည့် Keyword တစ်ခုခုဖြင့် ရှာဖွေကြည့်ပါက www.myanmaryellowpages.biz သည် ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် ရပ်တည်လျှက်ရှိပါသည်။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ကုမ္ဗဏီများ၊ ဟိုတယ်များ၊ဆိုင်/ရုံးခန်းလိပ်စာ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် အခြား သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားပေးပါသည်။
မိမိ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို မည်သူမဆ်ို Myanmar Yellow Pages မှလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ထိုသို့လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် Myanmar Yellow Pages လမ်းညွှန်စာအုပ်၊အင်တာနက် နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတဆင့် သန်းပေါင်းများစွာသော User များကရှာဖွေတွေ့ရှီနိုင်ပါသည်။
Google နှင့် Yahoo တွင်နံပါတ် ( ၁ )နေရာတွင်ရပ်တည်နေသော Myanmar Yellow Pages အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ၊ သုံးစွဲသူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော ပြီးပြည့်စုံသော ကုန်သွယ်ရေး ၊ စီးပွားရေး လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
BE FOUND WITH MYANMAR’S NO.(1)ONLINE BUSINESS DIRECTORY
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နံပါတ်(၁) အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလမ်းညွှန်
THE TOP POSITIONING WEBSITE
နာမည်ကြီး Website များဖြစ်သော Google, Yahoo, Bing စသည့် Website များမှတဆင့် Myanmar Yellow Pages ကိုရှာဖွေကြည့်ပါက မိမိတို့ Website သည် ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် ရပ်တည်လျက်ရှီပါသည်။
သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ပြည်သူများထိရောက်စွာ သိရှီနိုင်ရန်အတွက် တဖက်တလမ်းမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ALL THE NFORMATION YOUR CUSTOMERS NEEDS
သင်၏ဖောက်သည်များအား လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း
သင်၏ဖောက်သည်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၏ အဓီကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ဆိုင်/ရုံးခန်းလိပ်စာ ၊ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၊ Phone နံပါတ်များ ၊ ငွေပေးချေမှုစနစ်နှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြနိုင်ပါသည်။